နေတိုး တပ်ဖွဲ့ က အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ များအား သတ်မှတ်ထားသည့် စစ်အသုံးစရိတ် ရောက်ရှိအောင် ကြိုးစား အကောင်အထည် ဖော်ပြရန် အထူးပြောကြား
ဘရပ်ဆဲလ် ၊ ဇူလိုင် ၁၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
နေတိုး တပ်ဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးချုပ် Jens Stoltenberg က ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက် ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တွင် နေတိုး တပ်ဖွဲ့ဝင် များအနေဖြင့် စစ်အသုံးစရိတ် အား နိုင်ငံ GDP ၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်း အသုံးပြုကြရန် သတ်မှတ်ထားပြီး သဘောတူညီချက်လည်း ရရှိထားပြီး ဖြစ်ကာ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ များအနေဖြင့် ယင်း သတ်မှတ်ချက် သို့ ရောက်ရှိအောင် ကြိုးစား အကောင်အထည် ဖော်ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း အထူးပြောကြား ခဲ့သည်။
အင်္ဂလန် ၁ - ၂ ခရိုအေးရှား
အင်္ဂလန်အသင်း က ယခုပွဲ တွင် ၅ မိနစ် ကပင်ဂိုးသွင်းကာဦးဆောင်ဂိုးရယူနိုင်ခဲ့သည်။သို့ရာတွင် ခရိုအေးရှားကလည်းဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအသာဖြင့် အပြန်အလှန်ကစားနိုင်ခဲ့သည်။ထို့ကြောင့်လည်း ၆၈ မိနစ်တွင်ချေပဂိုးရယူခဲ့ပြီး အချိန်ပိုတွင်အနိုင်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ကာ အုပ်စုအဆင့်သာအမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ဖူးသော ဥရောပ၏ နိုင်ငံငယ်လေးက ပထမဆုံးအကြိမ်ကမ္ဘာ့ဖလားဖိုင်နယ်သို့တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံ နှင့် အင်္ဂလန်
၁၄.၇.၂၀၁၈. ၂၀း၃၀ နာရီ။
ပြင်သစ် နှင့် ခရိုအေးရှား
၁၅.၇.၂၀၁၈. ၂၁း၃၀ နာရီ။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းတွင် တိုက်ခန်းမီးလောင်မှုကြောင့် လူ ၅ဦးသေဆုံး
ပါရီ၊ ဇူလိုင် ၁၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ပြင်သစ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း Pau မြို့ တွင် ဇူလိုင် ၁၀ ရက် က မိသားစုတစ်ခု အကြား အငြင်းပွားမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ နေအိမ်၌ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ၂နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦး အပါအဝင် လူ ၅ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း ပြည်တွင်းမီဒီယာက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ရီယဲလ်မက်ဒရစ်တိုက်စစ်မှူးရော်နယ်ဒိုအား ယူရို ၁၁၂ သန်းဖြင့် ဂျူဗင်တပ်လက်မှတ်ထိုး
ရိုမာ ၊ ဇူလိုင် ၁၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ရီယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းတိုက်စစ်မှူး ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုသည် ဂျူဗင်တပ်အသင်းနှင့်လက်တွဲသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ရီယဲလ်အသင်းက ဇူလိုင် ၁ဝ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ပြင်သစ် ၁ - ဝ ဘယ်လ်ဂျီယံ
ယခုပွဲကအကြိတ်အနယ်ရှိလှပြီးနှစ်သင်းစလုံးပင်အပြိုင်အဆိုင်ကစားသွားကြသည်။သို့သော်ပြင်သစ်နောက်တန်း၏တောင့်တင်းမှုက ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်း၏ ထိုးဖောက်မှုများကိုကောင်းစွာကာကွယ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၅၁ မိနစ်တွင်သွင်းယူခဲ့သောအနိုင်ဂိုးနှင့်အတူ ပြင်သစ်က ကမ္ဘာ့ဖလား၌ ဖိုင်နယ်သို့ သုံးကြိမ်နှင့်သုံးကြိမ်အထက်ရောက်ရှိဘူးသောဆဋ္ဌမမြောက် အသင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ယခုပွဲအနိုင်ရသွားသော ပြင်သစ်အသင်းက အင်္ဂလန်နှင့် ခရိုအေးရှား ပွဲတွင် နိုင်သောအသင်းနှင့် ဇူလိုင် ၁၅ ရက်တွင်ဖိုင်နယ်ကစားမည်ဖြစ်သည်။ (ဆင်ဟွာ)
တူရကီ နိုင်ငံ တွင် သမ္မတ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ ပြုလုပ် ခဲ့ပြီး ဝန်ကြီး အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ
အန်ကာရာ ၊ ဇူလိုင် ၁၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တူရကီ နိုင်ငံ သမ္မတ Recep Tayyip Erdoğan က ဇူလိုင်လ ၉ ရက် တွင် အန်ကာရာ မြို့၌ သမ္မတ ရာထူး ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲ အခမ်းအနား တစ်ရပ် ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ပြီး ဝန်ကြီး အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် စာရင်း အား ထုတ်ပြန်ကြေညာ ခဲ့သည်။
နယ်သာလန်လေဆိပ်ရှိ လေယာဉ်တစ်စီးတွင် ဗုံးလန့်မှုဖြစ်ပွား
နယ်သာလန်၊ ဇူလိုင် ၁၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
နယ်သာလန်နိုင်ငံ Eindhoven လေဆိပ်ရှိ လေယာဉ်တစ်စင်းတွင် ဗုံးလန့်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဘေးကင်းအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်း နယ်သာလန်ရုပ်သံလိုင်း NOS က ဇူလိုင် ၉ရက် ညနေပိုင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
Jeremy Huntကို ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအသစ်အဖြစ် ခန့်အပ်
လန်ဒန် ၊ ဇူလိုင် ၁၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ထရီဇာမေ (Theresa May)က ဇူလိုင်လ ၉ ရက်တွင် ဥရောပသမဂ္ဂမှ ဗြိတိန် နုတ်ထွက်ရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် သဘောထားကွဲလွဲမှုများကြောင့် ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် (Boris Johnson)၏နေရာတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Jeremy Huntကို ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် အစားထိုးခန့်အပ်ခဲ့သည်။ Jeremy Huntသည် Oxford တက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းပြီးခဲ့ပြီး ဗြိတိန် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးအဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသည်။
တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီခဲ့ချန်က တရုတ်-ဂျာမနီ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးမြှင့်တင်ရေး ပူးတွဲအားထုတ်သွားရန် တိုက်တွန်းပြောကြား
ဘာလင်၊ဇူလိုင် ၁ဝ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်လီခဲ့ချန်က ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ဆက်လက်နလန်ထူရန် နှင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးကို တွန်းအားပေးရန်အတွက် တရုတ် နှင့် ဂျာမနီ နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် လွတ်လပ်ပြီး မျှတသော ကုန်သွယ်ရေးကို ပူးတွဲမြှင့်တင်သွားရန် ဇူလိုင် ၉ ရက်တွင် တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်သည်။
လန်ဒန်၊ ဇူလိုင် ၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် ဥရောပသမဂ္ဂမှ ဗြိတိန်နိုင်ငံ နုတ်ထွက်ရေး (Brexit) ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး ဒေးဗစ် ဒေးဗစ်(David Davis) ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် (Boris Johnson) လည်း ယခုလို ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသတွင်းမီဒီယာက ဇူလိုင်လ ၉ ရက်တွင် သတင်းဖော်ပြထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)